Cwangcisa ifayile yefayile yencwadi kumatshini wokushicilela | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ubeko lwamaphepha encwadi.
Xa kuziwa ekuprintweni kwencwadi, abantu abaninzi bakholelwa ukuba banokuthumela umxholo wesicatshulwa kuxwebhu lweLizwi apho lalibhalwe khona. Nangona kunjalo, ukuba inkampani yokuprinta ikwamkele ifayile yethumbuNjengoko kunokuthethwa kulwimi lobuchwephesha, kuya kufuneka uthathele ingqalelo uthotho lwezinto eziqwalaselweyo xa uqwalasela kwaye ugcina.
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba isiciko kunye namathumbu encwadi athunyelwa ngaphakathi iifayile ezimbini ezahlukeneyo, kwaye nganye nganye ineenkcukacha zayo.
Kweli nqaku siza kuchaza uyithumela njani ifayili yamathumbu ukucofa.
1 Into yokuqala ekufuneka uyazi
2 Ifomathi kunye nokufakwa ngaphakathi
3 Iifonti kunye nesisombululo
4 Imowudi yombala kunye namaphepha angenanto
5 Thumela kwi PDF
Into yokuqala ekufuneka uyazi
Ukuba awuyilo uyilo kwaye unayo isicatshulwa sencwadi yakho kuxwebhu lweLizwi, Sincoma ukuba usidlulisele ngokwakho kwinkqubo efana nale Isimilo, okanye ubeke umsebenzi kuyilo lomhleli onokukwenza.
Ukuyila incwadi Yinkqubo apho Khangela zonke izintoIsicatshulwa, imifanekiso, izihloko, izihloko, amanani njl njl, kumaphepha. Ukuba incwadi yethu ayibekwanga kakuhle, ukufunda kunokudinisa, indawo ichithwe, okanye ezinye izinto zinokulahleka okanye zinqunyulwe.
Ifomathi kunye nokufakwa ngaphakathi
Ubungakanani bencwadi yakho buya kuxhomekeka kwizinto ozikhethileyo okanye umyili ophetheyo. Kuyimfuneko ukuba basoloko behamba imida eyoneleyo ngaphakathi kwamaphepha, njengamanye 20 mm, Kwaye zonke izinto ezibalulekileyo ezinjengokubala amanani, isihloko okanye nayiphi na ilogo engafakwanga i-indent, ubuncinci ziya 8 mm kusikwa amacala. Ngale ndlela siya kukuphepha ukulahlekelwa yinxalenye yazo ukuba kukho impazamo yokusika.
Ukuba incwadi yakho ayopheli okanye ayinayo nayiphi na into edlula imida, ubungakanani befayile bunokuba yi imilinganiselo echanekileyo ekhethiweyo. Umzekelo, ukuba unefomathi esemgangathweni eyi-15 x 23 cm, kwaye yinoveli engenalo naluphi na uhlobo lwemifanekiso okanye izinto ezibonakalayo, ifayile iqulunqwe kunye naloo milinganiselo.
Kwelinye icala, ukuba incwadi yakho ineefoto okanye imifanekiso, okanye nayiphi na into ephuma kwimida yokusika, kuya kufuneka ushiye 3mm wopha okanye ukhuseleko kwimida kwicala ngalinye lamaphepha. Kule meko, amaphepha aya kuba zi-6 mm ngaphezulu ukuphakama nobubanzi xa kuthelekiswa nobungakanani boqobo.
Ukuba ifayile icwangciswe kakuhle kubungakanani kunye ne-induction, awudingi ukwabela amanqaku esityalo kuyo.
Amaphepha encwadi ebekwe kwi-Indesign kunye nemida yabo kwaye baphuma igazi.
Iifonti kunye nesisombululo
Sonke siyazi ukuba kukho iifonti eziza ngokwazo kuzo zonke iikhompyuter, kodwa ukuba uthathe isigqibo sokusebenzisa nayiphi na Ifonti ekhutshelwe kwi-intanethi, kufuneka uyishumekeOko kukuthi, uyiguqulele kubeko ukuze ingaguqulwanga okanye itshintshwe xa ithunyelwa ngaphandle. Kwi-Indesign, kuya kufuneka ukhethe isicatshulwa, kwaye uye ku Imithombo> Guqula ukuya kumjikelo. Qinisekisa ukuyishumeka kuphela xa uphonononge isicatshulwa kwaye awunazo iimpazamo zokuhlela.
Isisombululo sefayile kufuneka sibe I-300 dpi, Kukwacetyiswa okufanayo kuzo zonke iifayile eziza kuprinta, kodwa khumbula ukuba xa ubeka imifanekiso okanye iifoto, kuya kufuneka uzijonge nge-300 dpi ukuze ijongeke ibukhali kwaye ikumgangatho olungileyo.
Imowudi yombala kunye namaphepha angenanto
Ukuba ithumbu lencwadi yakho linombala kufuneka lingene Imowudi ye-CMYK, kwaye ukuba imnyama nomhlophe, kufuneka ingene Ngwevu. Ngoku ukuba amanye amaphepha akumbala kwaye amanye amnyama nomhlophe, kufanelekile yabela imo ehambelana nayo nganye, okoko nje umshicileli evumela ukuba icandelo elinye liprintwe ngombala kwaye elinye libe mnyama kwaye limhlophe.
Kungenzeka ukuba kwimeko apho Kuya kufuneka uwaqokelele ngokwendlela yemibala uzibeke ekuqaleni nasekupheleni kwencwadi, ukuze zingangeniswa. Kodwa kuba ayingabo bonke abashicileli abasebenza ngokufanayo, kubaluleke kakhulu ukuba uqale ubonisane nalowo usebenza naye.
Kuzo zonke iincwadi kukho amaphepha ashiyekileyo, ngakumbi ekuqaleni okanye esiphelweni. La maphepha angenanto kufuneka ubekhona kwifayile yakho kuba umshicileli akazidibanisi, ke ungalibali ukuzibandakanya.
Iphepha elingenanto lencwadi, elibandakanyiwe kwifayile ye-Indesign
Ukuba sele uwaqwalasele onke la manyathelo angentla, ukulungele uku thumela ifayile yakho kwiPDF. I amaphepha kufuneka ahambe ngokwahlukeneyo kwaye ungaze ujonge okanye usasaze amaphepha. Beka kuyo Umgangatho ophezulu wokuPrintaIsisombululo se I-300 ppp kwaye kubandakanya ukopha.
Thumela ifayile kwiPDF.
Ifayile yePDF enamaphepha ahlukeneyo.
Kwaye ngale nto ungathumela ifayile yakho kumshicileli kunye nefayile engaphambili nangasemva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungasithumela njani isisu sencwadi ukuze ucinezele
Fumanisa eyona pixel yobugcisa ilungileyo evela kwisandla sikaKonami kumdlalo wakhe omtsha